⛵🏝️INFORMAZIONI - Malta Okufanele ukwenze? Yini bona?Konke mayelana neMalta.
🚗NOLEGGI Auto Jeep 🚐 izikebhe 🚣 Scooters🛵Bikes🚴
🛌 🏠DOVE HLALANI
Villas e Malta
🛍️ IMIKHIQIZO IZIBONELO
INDLELA YOKUTHOLA TO Malta: INCWADI Ferry UKUBALEKELA
EMHLABENI ISLAND: Ukuqasha ISITHUTHUTHU / CAR
HLALA: HOTEL, B&B, amafulethi, CITY
I leziqhingi of Malta esikhungweni iMedithera, nje 90 km kusuka yeSisili 290 km ukusuka ogwini Afrika. Ngenxa yokuba sendaweni kungashiwo ukuthi umuntu gem e ngamazwe aseMedithera nase Yenziwe esiqhingini esikhulu onikeza igama layo ukuze lezi ziqhingi futhi iziqhingi ezimbili ezincane saseGozo futhi Comino.
Naphezu ubukhulu encane ungathola zonke izinhlobo izithakazelo nokuzijabulisa, izinhlobonhlobo zezinto ukubona futhi wenze leli qoqo leziqhingi eliyingqayizivele futhi ephelele. I Maltese Islands iqoqo art, umlando, imivubukulo, temdzabu, ezemidlalo, wezandla, art Culinary, wezandla, ezikhangayo futhi kumnandi, Yingakho lasendulo kanye yesimanje axutshwa ukwakha umbukwane kanzima ukuthola zimo.
Ezihlasela lezi ziqhingi njalo wakhethwa njengosuku indawo yi-Knights of St John, ezaziwa ngokuthi Cavalieri di Malta, Besenkolweni isikhashana wenkazimulo emlandweni kulezi ziqhingi futhi ahlanganiswe emizini nasezindaweni eziningi usebenza yobuciko.
Iziqhingi ngamasevisi ibhasi kazwelonke, kodwa ukuze ukwazi ukuvula ngokukhululekile ungasebenzisa imoto noma ngesithuthuthu yokuqasha, zikhona kuwo wonke amadolobha ngamanani ezifanele.
Malta iyisiqhingi esikhulu futhi iyona enkulu kunazo zonke ngosayizi, okuyinto kuwukuphela sezindiza leziqhingi; inhlokodolobha kuyinto Valletta, izivakashi eyinhloko kanye ne-port commercial leziqhingi, okuyindawo ungakwazi ukufinyelela olwandle ezinye izimbobo ezinye iziqhingi ezimbili ngokusebenzisa isevisi isikebhe wendawo.
Valletta nge Medina, Rabat e Iningi ezinye amahle ocebile idolobha Maltese wezinqaba, izigodlo, amasonto bese okuvimbezela ukuthi kwabavikela angaphandle abantu Ukuhlasela.
Lesi siqhingi sethiwa futhi exhumene emlandweni St Paul, owayebizwa umkhumbi lapha, sahlala khona izinyanga ezintathu; ufanelwe ukuba edolobheni resort St. SikaPawulu Bay.
Engxenyeni eseningizimu yaleli ugu zingabantu ongaphakeme futhi egcwele amatheku kanye coves njengalena lapho amanga okudotshwa olunothile Marsaxlokk. Ngaphakathi ungathola amathempeli lasendulo Tarxien futhi ezingavamile izinsalela nezakudala ka uHagari qim.
Ogwini engcono zitholakala enyakatho, kuwufanele ngokuvakashela iPharadesi Bay, Golden Bay e Ghajn Tuffieha Bay, kulandele Mellieha e Bugibba.
saseGozo Kuyinto isiqhingi esingesesibili ngobukhulu kuleli qoqo leziqhingi, ngaphansi touristy nenokuthula, lapho ijubane kancane nokuningi eziphumulele kuka Malta, kungenziwa kuphela kufinyelelwa isikebhe. Idolobha kuphela yangempela Victoria sise maphakathi isiqhingi; futhi uvakashele abadumile Blue Iwindi (Azuri Iwindi) umxhwele zemvelo idwala lwaleli eliphumayo olwandle, endaweni ethandwa kulabo abathanda diving.
Ngisho e saseGozo zingatholakala amasonto bese amathempelana, amathempeli nezakudala futhi ebhishi amahle Ramla lapho yetinsita basezinganekwaneni okuzelwe.
Comino iyisiqhingi esincane ukuthi amanga phakathi Malta futhi saseGozo, esafinyelelwa isikebhe, Indawo edumile ngezifo nezinhlungu snorkelers, nge izakhamuzi zakhona ambalwa nomndeni eyodwa kuphela Albergo Kungenzeka lesi siqhingi kakhulu kodwa ngokuthula enhle kakhulu.
INCWADI Ferry UKUBALEKELA
Ukuqasha ISITHUTHUTHU / CAR
HOTEL, amafulethi, CITY
Sesha amahhotela nokuningi ...
Ilanga 03 Jul 2022
Msombuluko 04 Jul 2022
Imigomo nenqubomgomo yobumfihlo
© 2022 Malta	| Inikezwe amandla yi Okuvelele